Ma waxaa la joogaa xilligii kala tagga Golaha Midowga Musharixiinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Ma waxaa la joogaa xilligii kala tagga Golaha Midowga Musharixiinta?
Khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay Golaha Midowga Musharixiinta, kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen go’aankii ay Xukuumaddu ku kala shaandheysay guddiga doorashada ee muranku ka taagnaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib dhowr sano oo isku aragti ay ka ahaayeen arrimo badan oo siyaasadeed, qaar ka mid ah xubnaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa ugu danbayn kala dareeray, wax ka yar 30 cisho ayaana la isku qabtay labo qodob oo waaweyn, kuwaas oo lagu guuldareysaty in la xalliyo ka hor inta aysan bannaanka u soo bixin.
Dadka u dhuunduleela, Siyaasadda iyo hab-dhaqanka Siyaasyiinta Soomaalida, waxa ay hore u odorasayeen in la joogo xilligii kala haadka Golaha Midowga Musharixiinta iyo guud ahaan kutlooyinkii iskaashatada ahaa ee sida adag kaga soo hor jeeday Farmaajo, kadib markii amniga iyo hoggaanka doorashooyinka lagu wareejiyay RW Rooble.
Billaawgii bishii la soo dhaafay ee May, xubno ka mid ah Midowga, oo ay hor boodayaan Cabdulqaadir Cali Cosoble, iyo Daahir Maxamuud Geelle, ayaa baahiyay waraaq ay sheegeen in ay ka soo baxaday GMM, isla-markaaana lagu xusay in RW uu ka shaqeenayay cuuryaaminta doorashooyinka, taas oo abuurtay dood markii danbe lagu guuleystay in la xalliyo, kadib markii qaar ka mid ah Xisbiyada Siyaasadeed ay si dadban u beeniyeen jiritaanka waraaqda.
Mar kale, Todobaadkaan, ayay arrintu faraha ka baxday kadib markii uu Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha uu sheegay inuu kala shaandhayn ku sameeyay guddigii doorashada ee muranku ka taagnaa, loona gudbiyay si wax looga badalo.
Mar kale Cabdulqaadir Cosoble, iyo Daahir Maxamuud Geelle, oo uu wehliyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa hormuud u noqday, soo dhaweynta go’aanka ay Xukuumaddu ka qaadatay guddigii lagu muransanaa, iyadoo ay jirto cabasho ay qabaan xubno muhiim ah oo ka tirsan Golaha, sida Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Madaxweynayaashii iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo Xasan Cali Kheyre, ayaa arrintaan wali ka hadlin oo gaabsaday, waxaana la rumeysan yahay in Madaxweynayaashii hore ay si weyn ula dhacsan yihiin go’aanka Xukuumadda, isla-markaana ay soo wakiisheen xubnihii hadlay.
Xildhibaanno xubno sare ka ah labada Xisbi ee Himilo Qaran iyo UPD, ayaa qudhoodu si weyn u soo dhaweeyay go’aanka kala jabka abuuray, waxayna arrintaani bannaanka soo dheysaa in la taagan yahay xilligii ay kala tagi lahaayeen, Golihii muddada dheer isku aragtida ahaa.